Amiirad Sacuudi ah oo loo maxkamadeynayo | Berberanews.com
Home WARARKA Amiirad Sacuudi ah oo loo maxkamadeynayo
Amiirad Sacuudi ah oo loo maxkamadeynayo
Amiirad reer Sacuudi ah ayaa iyadoo aan joogin goobta dacwadda lagu maxkamadeynayaa magaalada Paris, ee Faransiiska.
Qareenka u doodaya amiiradda Xisa Bint salman, ayaa sheegay inay tahay “bani’aadan wanaagsan oo dadka kale aad u daryeesha”, kiiska loo haysta ee ah inay ilaaladeeda ku dalbatay in la garaaco qof u shaqeynayey uu yahay been-abuur.
Amiiradda ayaa maxkamad aysan goobjoog ka ahayn lagu oogay magaalada Paris ee Faransiiska, iyadoo loo haysto inay qeyb ka ahayd in la ciqaabo, isla markaana la afduubo muwaaddin dalka Masar u dhashay oo u shaqeynayey.
Arrintan ayaa dhacday bishii September ee sanakii 2016-ka.
Wakaaladda waraka ee Reuters, oo aragtay dacwadda laga gudbiyay amiiradda ayaa sheegtay in ninka shaqaalaha uu boliiska u gudbiyay dacwad ah in ilaalada boqorka uu xirxiray, garaacay kaddibna uu ku qasbay inuu lugaha ka dhunkado amiiradda, kaddib markii lagu eedeeyay inuu sawir kaga qaaday telefoonkiisa gacanta.
Dhaawacyada soo gaaray shaqaalaha ayaa u horseeday inuu shaqeysan waayo muddo siddeed maalmood ah, siday sheegtay wakaaladda wararka AFP.
Dacwadda kaddib ayaa la xiray ilaalada amiiradda isagoo lagu eedeeyay inuu gaystay jirdil, xatooyo iyo afduub.
Sida “eyga ayaa la ila dhaqmay”
Ninka dacwadda gudbiyay ayaa boliiska u sheegay in Amiiradda ay sida “eyga ula dhaqantay, marka la garaacayay”, waxayna igu tiri ayuu yiri “waxaan ku bari doonaa sida loola hadlo qof amiirad ah”.
Waxaa uu sheegay inuu sawir ka qaadanayay guriga uu ka shaqeeyo ka hor intaan lagu eedeyn inuu doonayay inuu sawirradaas ka iibiyo warbaahinta.
Warbaahinta Sacuudiga ayaa waxay inta badan aad u ammaantaa Amiirad Xisa, taas oo ay ku tilmaamaan inay tahay samafale.
Sacuudiga iyo Faransiiska ayaa leh xiriir wanaagsan, inkastoo Madaxweyne Emmanuel Macron uu haatan difaacayo heshiiska quwadaha waaweyn iyo Iran, kaas oo uu Maraykanka ka baxay.
Dhowr jeer oo hore ayaa qoyska reer boqor ee Sacuudiga lagu maxkamadeeyay dalka Faransiiska.
Sanadkii 2013-ka, waxaa lala wareegay hantida Amiirad Maha Al-Sudeyri, oo ah xaaska wasiirkii arrimaha gudaha ee hore, Nayf Bin Cabdilcasiis, si loo bixiyo deyn uu huteel ku lahaa oo kor u dhaafayso $6m oo doollar.
Previous articleGuddoomiyaha UCID oo xukuumadda ku eedeeyay inay ka gaabisay colaadda Ceel-afweyn
Next articleDagaal dhexmaray caare iyo ciidanka qaranka, mudaharaad rabshado wata oo ka socda Ceerigaabo iyo wararkii u danbeeyay
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo isku shaandhayn ku sameeyay Garsoorayaasha
Wasiirka Warfaafinta: Ma Xidhayno wariyeyaasha
Kim Jong-un oo Faras ku fuulay buurta ugu dheer dalkiisa
Qatar oo difaacday weerarka Turkigu ku qaaday Gudaha Syria
Waddani oo hakiyay xubintii ay u xusheen Komishanka Doorashooyinka
Doon u rarnayd Boosaaso oo ku degtay badweynta Hindiya
Madaxweynaha Ruushka oo shimbir hadyad u guddoonsiiyay Boqorka Sucuudiga
Somali ka qaybgalay Xuska Shiicada ee dilkii Imaam Cali
Maareeyaha Dekedaha Somaliland oo sheegay qorshe lagu dhisayo Saylac
Sucuudiga oo albaabada u furay dalxiiska laba goobood mooyee
Marwo Faadumo Siciid oo shaacisay inay ka baxday Xisbiga Waddani
Wasiirka Gaadiidka oo kormeer ku tegay biriijyada Saaxil
Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo Ku Baaqay In Talada Nabadaynta ceelafweyn...
Xildhibaan Arin Yaableh Horkeenay Golaha Wakiiladda “Website-Deenii Diinta Kiristankay Faafiyaan, Dhaqan...
Beelihii Soo Saaray Muuse Biixi Oo Taageeradii Kala Laabanaysa Xisbiga Kulmiye...